Zidlana imilala phakathi kosomabhizinisi nabathengi – Bayede News
Zidlana imilala phakathi kosomabhizinisi nabathengi
Osomabhizinisi bathenga impahla eningi belungiselela abathengi. Bayazi ukuthi lesi sikhathi yisikhathi sokwenza imali ngoba abantu baphila entokozwen
Kuyaye kuthiwe uma kukhulunywa ngebhubesi noma esinye isilwane sasendle esiphila ngokudla ezinye izilwane, uma livuka ekuseni lisuke lazi kamhlophe ukuthi uma lifuna ukulala lisuthi kumele lizimisele ukugijima ngokuzikhandla, ngale kwalokho kuyoze kuhlwe lilambile. Ngenxa yalokho amehlo ebhubesi ahlala evulekile ebheke inyamazane ukuze liyithathelele. Ngokunjalo inyamazane ivuka ekuseni yazi ukuthi uma ifuna lishone ilanga isaphila, kumele izimisele ukugijima izephule uma kuqhamuka ibhubesi noma abazingeli.
Lesi singathekiso ngisicabange ngasisondeza empilweni kasomabhizinisi nabathengi ngalesi sikhathi sonyaka. Yisikhathi esibalulekile kosomabhizinisi ngoba iningi labantu lizama ukonga lokho elinakho okusale kubuswa ngoKhisimusi. Abanye bathenge baze bakhohlwa ngenxa yokuthathwa yinjabulo kaKhisimusi. Osomabhizinisi basemkhankasweni wokuheha abathengi ukuba bathenge ukuze bakwazi ukuphila kulezi zinyanga ezimbili zokuqala. Abanye baze behlise amanani ezinye zezimpahla ukuze bahehe abathengi bashiye imali esitolo.
Ngesikhathi sokuphela konyaka iningi labantu lisuke lithole amabhonasi emsebenzini, abanye basuke behlukanise izitokofela, bese kusho ukuthi imali yiningi esezandleni zabantu befi sa ukuthenga noma yini abakade bayilangazelela. Idumela likaKhisimusi libonakala kakhulu abantu bethenga izinhlobo ezinhlobonhlobo zeziphuzo, omunye akhiphe unyonyovu lwemoto. Yisikhathi lapho abantu bephana kakhulu ngoba kusuke kunenjabulo engachazeki bagcine bengabali.
Osomabhizinisi bathenga impahla eningi belungiselela abathengi. Bayazi ukuthi lesi sikhathi yisikhathi sokwenza imali ngoba abantu baphila entokozweni. Uma umuntu ethokozile ugcina ethenga ngaphandle kokucabangisisa. Abaningi bathi uma sebebona ubukhazikhazi obusesitolo badideke bangabe besazi ukuthi bebezothengani, bagcine sebethenga izinto abebengazisophile bephuma emakhaya.
Ucwaningo olwenziwa yiRetail Capital luveza ukuthi wehlile umdlandla wokuthenga kubantu kulo nyaka owedlule. Isibalo sabathengi asifani neminye iminyaka eyedlule. Lokhu kufaka ingcindezi kubanikazi bamabhizinisi. Osomabhizinisi abangama-700 baphendula ngendlela efanayo bethi kulo nyaka odlule bekumele bazibambe ziqine ngoba izinto bezingahambi ngendlela ejwayelekile. Lokhu kusho ukuthi imali ayingenanga njengokujwayelekile. Uma kunje iningi losomabhizinisi linquma ukungaziholeli lona kodwa likhokhe izindleko ezimile zebhizinisi ngenxa zesimo sabathengi. Abanye banquma ukudiliza abasebenzi ukuze bakwazi ukumelana nengcindezi, abanye banciphisa isikhathi esisetshenzwa ngumsebenzi ngamunye ukuze bathi ukuphefumula. Kukhulunywa ngoKhisimusi nje kosomabhizinisi abaningi awubonakalanga kangako umehluko ngokungena kwemali.
Osomabhizinisi abangamaphesenti angama-58 bakhala ngamabhange ukuthi awakhombisi ukusebenzisana nosomabhizinisi kulesi sikhathi. Abangamaphesenti angama-90 bathi isikhathi ababhekene naso sinzima, babheke isenti nesenti elingenayo neliphumayo.
Amaphesenti angamashumi amane osomabhizinisi bathi ayikho imali yokukhokhela umshuwalense ozogada izimo ezithile zebhizinisi, ngakho-ke basebenza ngaphandle komshuwalense kulesi sikhathi. OnguMphathi Jikelele weRetail Capital wakugcizelela ukuthi akusiso isikhathi esihle kumabhizinisi lesi. Kumele osomabhizinisi benze konke okusemandleni ukugcina ibhizinisi lisebenza, ngoba emva kwesikhashana singase sidlule lesi simo.
Impi seyisendlini, ingene ngathi lapho sidembesele khona savula iminyango yokungenisa ubuphofu, gengelezi. Sidoncule izikhonkwane ezaziyisisekelo sesizwe, saphelelwa amandla namasu okuzivikela lapho isitha singena phakathi kwethu.
Bayaphoqeka osomabhizinisi ukuba babheke izindlela abangazisebenzisa ukukhokhela labo abathenge kubo, nokukhokha amaholo abasebenzi. Lokhu kuthatha isikhathi abangasisebenzisa ukuthuthukisa nokukhulisa ibhizinisi.
Ngenxa zokuphela kwemisebenzi nesimo somnotho esilubhojozi banciphile abathengi. Abantu baqale bacabangisise ngaphambi kokunquma ukuthenga, okuletha inkinga kubanikazi bamabhizinisi. Izeluleko ziluma ziphozisa okwegundane, ngoba abathengi belulekwa ukuba banciphise ukuthenga, kanti kolunye uhlangothi kukhuthazwa osomabhizinisi ukuba bahehe abathengi ukuba bafi ke ngobuningi beze ukuzothenga.
Posted in Ezomnotho, Imibono